Umda we-A3 + Ubungakanani be-Epson L1800 Ifoto ye-Ink Tank ye-Inkjet Printer
I-L1800 yinkqubo yetanki yokuqala ye-inki engama-A3 + 6 umshicileli, ekunika amandla okuvelisa okungenamda, umgangatho wefoto ishicilela kwiindleko eziphantsi kakhulu zokubaleka. Xa kuziwa ekwabelaneni okuphezulu iimpembelelo ezibonakalayo kwinqanaba elikhulu, i-L1800 sisisombululo onaso kudala ndilindile.
. Ukuvelisa ukuya kuthi ga kwi-1,500 yeefoto ze4R
. Shicilela isantya ukuya kwi-15ppm
. Ibhotile ye-inki ephezulu
. Iwaranti yonyaka omnye okanye iiprinta ezingama-9,000
Umshicileli omtsha woqobo we-CISS imibala emi-6
Ngaphandle kwe-orignial inki ngaphakathi
Ukhetho olulungileyo lokushicilela i-sublimation
Ukukhawuleza okukhawulezayo kwe-A3 / A4 / iPhepha lokuSongelwa kwePhepha leMpahla eyolukiweyo kaMup / yengubo / yeNdebe / yeMouse Pad Printa
Iphepha le-Sublimation, elenzelwe ngokukodwa isantya esiphezulu sokuprinta i-inkjet yedijithali yoshicilelo. Kufanelekile ukuprinta kwe-inkjet ngesantya esiphezulu nasemva kokuprinta, i-inki eyomileyo ngokukhawuleza, inokuba nobomi obude bokugcina emva kokushicilela kunye nokugcina umgca ogqibeleleyo kunye neenkcukacha zokuprinta, izinga lokudlulisa linokufikelela kuma-95%. Umgangatho ophezulu wephepha kunye nesambatho ngokufana okugqwesileyo kunye nokuguda. Izibonelelo zezobugcisa obulula, ukushicilelwa ngokuthe ngqo ngaphandle kwenkqubo yokwenza ipleyiti emfutshane, ukugcina ixesha kunye nomzamo; yome ngokukhawuleza, ukumelana kakuhle, ukuprinta ngaphandle kokushwabana; ukutyabeka okufanayo, ukucoceka kwe-inki, ukulungiswa okuncinci
Ixabiso eliphantsi, ukuPrinta okuphezulu kweVolumu A3 Ubungakanani Epson L1300 Ifoto Ink Tank Inkjet Printer
I-Epson L1300 yimihlaba yokuqala enemibala emi-4, umshicileli wenkqubo ye-inki ye-A3 + yoqobo, ezisa ukufikelela kwi-A3 ekumgangatho ophezulu wokushicilela uxwebhu ngendlela enkulu.
Ibhotile ye-inki ephezulu
Shicilela isantya ukuya kwi-15ipm
Shicilela isisombululo ukuya kuthi ga kwi-5760 x 1440 dpi
Iwaranti yeminyaka emi-2 okanye amaphepha angama-30,000, nokuba yeyiphi eza kuqala
I-5-25% SN yeBlue / Purple Umbala weSilivere yeNitrate, uMqondiso wePen, iPen yokuVota kwiPhulo loNyulo lePalamente / uMongameli
I-inki engacimekiyo, enokusetyenziswa ngebrashi, ipeni yokumakisha, ukutshiza okanye ngokufaka iminwe yabavoti ebhotileni, ine-nitrate yesilivere. Ukukwazi kwayo ukungcolisa umnwe ixesha elaneleyo-ngokubanzi ngaphezulu kweeyure ezili-12- kuxhomekeke kakhulu kuxinaniso lwe-nitrate yesilivere, indlela esetyenziswa ngayo kunye nokuba ihlala ixesha elingakanani kulusu nakumnwe ngaphambi kokucinywa kwe-inki. Umxholo wenitrate yesilivere unokuba yi-5%, 7%, 10%, 14%, 15%, 20%, 25%.
Ipeni engahambelaniyo yokumakisha isetyenziswe kumnwe wokuqala (ngesiqhelo) wabavoti ngexesha lonyulo ukuthintela ubuqhetseba bonyulo njengokuvota kabini. Yindlela esebenzayo kumazwe apho amaxwebhu okuchonga abemi angahlali emiselwe ngokomgangatho okanye kumaziko.
I-5-25% yesilivere ye-Nitrate eluhlaza okwesibhakabhaka / Umbala o-Purple weSilivere yeNitrate yoNyulo, i-Ink engafakwanga, i-Ink yokuVota kwi-Campaign yoNyulo ePalamente / kunyulo lukaMongameli
Sigxiliswe kwimveliso ye-inki, isitampu sephepha, isitampu, ngakumbi imveliso yonyulo, enje nge-inki engacimekiyo, i-inki ye-UV, ipeyinti yeminwe, kwaye sinokubonelela ngayo nayiphi na enye imveliso kukhetho, Kule minyaka idlulileyo uthumele ngaphandle i-inki. yePhilippine, iUganda, iIraq, iJiphutha, iIraq, iSudan, iNigeria, iCongo, iMali, neBurkina Faso, iKenya, iTanzania, iAfghanistan, iNigeria, iCongo, iMalawi…
UkuPhathwa kweTyhefu yoTywala ngaphambi kokuTyalwa kweTyhefu ngeTyhuthi yeT-shirt yeeLaphu zeKotoni yeeNdebe zeGlasi zeCeramic Metal Wood Printing
Sublimation ukutyabeka kuyinto Sublimation wawutyabeka umqhaphu yenzelwe yoshicilelo yedijithali ukuxhasa ukusetyenziswa kweemveliso eziphuhliswe ngokukodwa, izinto ezingundoqo amazwe iimveliso ezikumgangatho ophezulu ukuqinisekisa intuthuzelo yomqhaphu uzive emva yoshicilelo sublimation, umbala kunye nombala fastness, ukudluliselwa isebenza kakuhle, ipateni kunye noethe-ethe , ixesha elide lingapheli kwaye linokufezekisa umphumo.
I-7ML / Ibhotile eyenziwe ngePowder yeGolide yePowder Umbala we-Fountain Dip Pen Calligraphy Ukubhala ukupeyinta iGraffiti engekho iCarbon
Iipcs ezili-12 x Dip Dip Ink Ink (ipeni ayifakwanga).
I-18ml yeGlitter Powder Umbala weCalligraphy Ukubhala ukupeyinta uMthombo weBhotile yePen Ink
Imibala engama-24 eyahlukeneyo, enokusetyenziselwa ukubhala, ukupeyinta, ukumakisha, ukubhala igrafiti.
Lukhetho olufanelekileyo kwisikolo okanye kwiofisi oyisebenzisayo.
Ngomgubo we-glitter kwi-inki, ukwenza ukuba ukubhala okanye ukupeyinta kube mnandi.